राखी सावंतले भनिन्,‘आर्टिस्ट मात्रै किन ? मन्त्रीका छोराहरु पनि समातिनु पर्ने हो ड्र’ग्स केसमा’ – " सुलभ खबर "
एजेन्सी । बलिउडकी आ’ईटम डान्सर राखी सावंतले एनसीबीलाई प्रश्न गरेकी छन् । उनले ड्र ‘ग्स केसमा कलाकारहरुलाई मात्र गि’रफ्ता’र गर्दै बयान लिई रहेको विषयमा यो फे’यर नभएको भन्दै मन्त्रीका छोराहरुलाई पनि गि’रफ्तार गर्नु पर्ने बताएकी छन् ।
राखीको यो भनाईलाई यतिबेला सोशल मिडिया यूजरसले निकै नै थ’म्बस दिई रहेका छन् । राखीले डाईरेक्ट भनेकी छन्,‘आखिर किन आर्टिस्टलाई मात्र समातेर सोधपुछ गरिएको छ ? किन बलिउड कलाकारलाई मात्र नि’शानामा राखिएको हो ? राख्ने नै हो र सोधपुछ गर्ने नै हो भने मन्त्रीका छोराहरुलाई पनि गि’रफ्तार गरेर यसको विषयमा सोधपुछ गरिनु पर्छ । उनीहरुलाई किन गि’रफ्तार गरिएको छैन ?’
राखीले आफ्नो अपकमिंग फिल्म ‘विनाशक काल’ को लन्च गर्ने क्रममा मिडिया सामू यस्तो बयान दिएकी थिईन् । राखीले आफु र कमेडियन भारतीबीच निकै नै ग’हिरो मित्रता रहेको पनि बताएकी थिईन् । राखीले जब भारती र हर्ष ड्र ‘ग्स केसमा गि’रफ्ता’र भए भन्ने खबर सुनिन् तब उनलाई त्यो खबर पत्याउनै गाह्रो भएको पनि बताएकी थिईन् । राखीले भारतीको घरमा कसैले लुकाएर उनीहरुलाई फ’साएको हुन सक्ने बताएकी थिईन् ।